Toa hoe nisy krizy politika teo anivon`ny Antenimieram-pirenena sy ny fitantanana ny Repoblika dia nihazakazaka be ny raharaham-pifidianana sy raharaham-pirenena ka izay vao taitra ireo milaza ho mpanao politika rehetra ireo hirotsaka hofidiana kanefa tara ny fanomanana. Amin`izao herinandro fahefatra amin`ny fampielezan-kevitra izao vao mahita ny fiantraikany amin`ny fanomanana. Ny hafa anefa efa fotoana maharitra no nanomana. Ahiana hisy amin`ireo kandidà ireo, indrindra ireo tsy manana vintana ho lany mandrakizay no tsy hanan-katao afa-tsy ny hitsikera. Miaina anaty fahakiviana sy fahantrana ny firenentsika ary izany no anton`ny hetsi-bahoaka nisy teto amin`ny firenena, naneho hahatezerana ary rariny loatra izany. Mitaky ny rariny sy ny fahaiza-mitantana ary ny fandraisany anjara amin`ny raharaham-pirenena ny vahoaka Malagasy ka amin`ny alalan`ny safidim-bahoaka no tena hanehoany ny fahefany. Ny olom-pirenena rahateo dia efa nitodika tamin`ny lasa ary mibanjina ny ho avy.